Bulshada Xudur oo kacabanaysa ciriiriga ka jira helidda biyaha xareedda War-caday+(SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Bulshada Xudur oo kacabanaysa ciriiriga ka jira helidda biyaha xareedda War-caday+(SAWIRRO).
Bulshada Xudur oo kacabanaysa ciriiriga ka jira helidda biyaha xareedda War-caday+(SAWIRRO).
Mootooyin iyo gaaridareemo ayaa saf ugu jira in biyo xareed ah ay ka dhaamiyaan War-caday oo ah isha keliya ee bulshada magaalada Xudur biyaha xareedda ay ka helaan.
Warta waxa biyaha banaanka uga soo saara nidaamka soolarka cadceedda ku shaqeeya iyo qalab kale ee loogu talagalay oo saacado kooban shaqeeya, mana dabooli karo baahiyaha looqabo biyaha xareedda, waana hal tubo oo ciriiri ah oo safaf dhaadheer loogu jiro sidii biyaha looga dhaansan lahaa.
Waa abaare tobanka barqanimo dadka iyo duuyada goobta taagan waxay saf dheer soo galeen lixdii aroornimo sida ay sheegeen ilaa hadana lama siideynin, sababtuna waxay tahay waxa la sugayaa inta cadceeda ka kululaanayso oo soolarada biyaha ugu shubayaan haanta.
Xuseen Xasan iyo Cabdulaahi Warsame Cali oo ah shaqaalaha gacanta ku haya maamulka warta weyn ee War-cadey ayaa waxa ay ii cadeeyeen in ciriiri badan uu ka jiro, waxayna sabab uga dhigeen in dadka sida joogtada ah u dhaansada ay barkado ku kedsanayaan, wartana ay u baahan tahay in loo helo matoor weyn oo biyaha haanta qeybteeda sare gaarsiin kara.
Magaada Xudur waxay leedahay ceelal farabadan oo isugu jira ceel gacmeedyo iyo ceel matoor haseyeshee biyaha ceelashaan macaan ma ahan ee dhanaanka ayaa ku badan, sidaa darteed biyaha macaan ee ku jira War-caday waxa loo isticmaalaa cabdidad, cunto karinta iyo dhaqidda dharka, waxaana gudaheeda la dhigay baca biyaha keydiya, wasakhdana ka ilaalisa.
Previous articleSafiirka Talyaaniga u joogay DRC oo la dilay.
Next articleLiibiya: Inka badan 150 Muhaajiriin Tahriibayaal oo laga badbaadiyay kooxo Burcad ah.
MADAXWEYNE FARMAAJO OO KA TACSIYEEYEY GEERIDA UGAAS XASAN UGAAS KHALIIF
Wasiirka Arrimaha Dibadda ” Heshiiskii 17-kii September waa heshiis taagan oo u baahan in la fuliyo”.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ” Heshiiskii 17-kii September waa heshiis taagan oo...